Windows7Version အနိမ့်ကနေ Version အမြင့်ကိုပြောင်းချင်တဲ့သူများအတွက် ~ မျိုးကို
Windows7Version အနိမ့်ကနေ Version အမြင့်ကိုပြောင်းချင်တဲ့သူများအတွက်
စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ကြည့်ရင် သယ်ချင်းတို့ အတွက် အသုံးဝင်မယ် ထင်လို့ ကိုလွင်မင်းဗိုလ် ဆိုက်မှ ပြန်လည်မျှဝေပါသည်..။
Windows7Version အနိမ့်ကနေ Version အမြင့်ကိုပြောင်းချင်တဲ့သူများ ဒီအောက်က Key များကို ရိုက်ထည့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။
Windows7Starter ကနေဆို ဘယ် Version ကိုဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းလို့ရပါတယ်..။ Windows7Home Premium ကနေဆိုရင်တော့ Professional နဲ့ Ultimate ကိုပဲပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပီး .. Windows7Professional ကနေဆိုရင်တော့ Ultimate တစ်ခုကိုပဲ ပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်..။
လုပ်နည်းကတော့ လွယ်ပါတယ်..။ အောက်မှာလည်းပုံလေးတွေနဲ့ ပြထားပါတယ်..။
Windows7Upgrade Keys များ
Window7Home Premium အတွက်အောက်က အနီရောင် ကီးများ
Window7Professional အတွက်အောက်က အစိမ်းရောင် ကီးများ
Window7Ultimate အတွက်အောက်က ခရမ်းရောင် ကီးများ
1.Start က Search Box မှာ Windows any time upgrade လို့အရင်ရိုက်ထည့်ပါ..။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဆက်သွားလိုက်ပါ..။
2. Enter an upgrade key ကို နှိပ်ပါ။
3.အ ပေါ်က ပေးထားတဲ့ Key တစ်ခုခု ကိုထည့်ရမှာပါ..။ ပီးရင် Next ကို နှိပ်ပါ။
4. I accept ကို Click ပါ...။
5. Key ကို Verify လုပ်နေမှာပါ။
6. Key ကို Verify လုပ်ပီး Upgrade လုပ်လိုက်ပါ။
7. ဒီ Transforming Process အတွင်းမှာ Restart လုပ်တာ ကို လုပ်ပေးလိုက်ရင် .နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်တို့ ပြောင်းလိုက်တဲ့ Window Version လေး ရမှာပါ ။
မိမိတို့ဆီမှာ Version မမြှင့်ခင် အရင်ဆုံး Windows7Loader လေးတွေဆောင်ထားသင့်ပါတယ်..။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Version မြှင့်ပြီး သွားရင် Window က Product Key ပြန်တောင်းတတ်ပါတယ်..။ အဲခါကျရင် Loader တခုခုနဲ့ ပြန်ကာလို့ရအောင်လို့ပါ..။ Windows7Loader တွေကို ညီနေမင်းဆိုဒ် နဲ့ နေမင်းမောင်ဆိုဒ် မှာ အများကြီး တင်ပေးထားပါတယ်..။ လိုလိုမယ်မယ် အရင်သွားရှာပြီး ဒေါင်းထားလိုက်ပါ..။